VaJonathan Moyo Vosungwa neMapurisa
Professor Jonathan Moyo (Photo: Prof. Moyo Twitter account)
Gurukota rinoona nezvedzidzo yepamusoro Muzvinafundo Jonathan Moyo nemusi weChitatu vakasungwa nemapurisa vachipomerwa mhosva yehuwori asi vakazosunungurwa vachiendeswa mumaoko emagweta avo.
VaMoyo vakasungwa nevebazi rinorwisa huwori reZimbabwe Anti- Corruption Commission kana kut ZACC vachipomerwa mhosva yekuita zvehuwori vachishandisa zvisizvo mari inodarika zviuru mazana mana inofanira kubatsira vadzidzi yehomwe yeZimbabwe Manpower Development Fund kana kuti ZIMDEF.
Muzvinafundo Moyo vakazvipira kumahofisi eZACC kuMt Pleasant muHarare vaine magweta ravo VaTerrence Hussein.
VaMoyo mbune vakatenda padandemutande retwitter kuti vainge vatora mari yeZIMDEF vachitengera madzishe nemasabhuku mudunhu ravo ravanomirira mudare reparamende reTsholotsho mabhasikoro uye imwe vachiti vakaipa kubazi reZanu-PF Youth League.
Asi VaMoyo vange vorova nhendeshure vachiti mutevedzeri wemutungamiri wenyika VaEmmerson Mnangagwa ndivo vakange vaita kuti vasungwe kunyangwe ivo vainge vaine maoko akasviba.
Vamwe vari kupomerwa mhosva yekuhuwori panyaya yehomwe yemari iyi ndi Dr Godfrey Gandawa mutevedzeri waVaMoyo uye mukuru weZIMDEF VaFredrick Mapute avo vari kutaruisirwawo kumiswa pamberi pedare mazuva mashoma anotevera.
VaMoyo vari kutarisirwa kumiswa pamberi pedare mumazuva mashoma anotevera.